Muqdisho: Laba Suxufi oo sanad iyo badh Afduub loo haystay oo sheegay in la jidh-dilay | Somaliland.Org
Muqdisho: Laba Suxufi oo sanad iyo badh Afduub loo haystay oo sheegay in la jidh-dilay
November 26, 2009	Muqdisho (Somaliland.Org)- Laba Suxufi oo u kala dhashay Australia iyo Kanada, isla markaana muddo sanad iyo saddex bilood ah ay Afduub u haysteen Koox Dabley Soomaali ahi, ayaa sheegay in la jidh-dilay intii afduubka loo haystay, maalin ka dib markii laga soo daayay Kooxdaas.
Nigel Brennan oo ah Sawir-qaade dhalashadiisu tahay Australia iyo Amanda Lindhout oo iyana u dhalatay dalka Kanada, ayaa shalay gelinkii dambe la sii daayay, ka dib markii ay muddo sanad iyo saddex bilood ah Koox Dabley hubaysan oo Soomaali ahi afduub ugu haysteen meel u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye.
Sida ay baahisay Idaacadda New Zealand oo aanu Warkan ka soo xiganay, labadan Suxufi oo markii dableyda laga soo daayay la geeyay Hutel Saxafi ee Magaalada Muqdisho, lana filayo inay maanta oo Khamiis ah u duulaan dalka Kenya oo ay u sii dhaafi doonaan dalalkooda, ayaa la soo daayay ka dib markii sida la sheegay la bixiyay Lacag Madax-furasho ah oo dhan 1-Milyan oo Doollar. Hase ahaatee, ma jiraan warar xaqiijinaya bixinta Madax-furashadaas.
Labadan Suxufi oo duleedka Magaalada Muqdisho laga afduubay bishii August ee sanadkii hore, waqti ay ku jireen hawlahooda Saxaafadeed, waxay sheegeen in Jidh-dil loo geystay muddadii ay u afduubnaayeen Dableyda Soomaalida ah.